warkii.com » Sargaal reer hindiya caan ah oo kudhaartay in Sushant uu dilay Gangster Dawood Ibrahim!!
Sargaal reer hindiya caan ah oo kudhaartay in Sushant uu dilay Gangster Dawood Ibrahim!!
Dawood Ibrahim waa Gangster-ka ugu weyn hindiya mudadii 30-sano udambeysay dowlada hindiya ayaana ninkaan ilaa hada qaban la’ waxuu awood ku heestaa Mumbai iyo hareeraheeda oo ciidankiisa maamulaan.
Awood iyo maamul kalena ma ahee micnaha siduu rabo ayuu wax uqasaa qofkuu rabo ayuu dilaa wax cadeyn ahna ma reebo ugu dambeyn marka la ogaada in kiiskaas isaga ka dambeyana booliska ma qaban karaan ileen meel uu kunool yahay lama yaqaano waa Gangster awood badan.
Sargaal hore oo ciidanka hindiya kujiray misane howl gabay ayaa muuqaal iskasoo duubay wana nin ku xeel dheer kiisaska dambi baarista waxuu sheegay in Sushant la dilay uuna dilay Dawood Ibrahim bal hadalkiisa aan isla fiirino hoos kaga bogo. “Dawood Ibrahim ayaa dilay Sushant weyna iska cadahay inkastoo Dawood Mumbai joogin hadana awoodiisa ayaa ka taliso oo ciidan badan ayuu ku leeyahay Sushant 50-jeer ayuu lambarkiisa Mobile-ka bedelay, dhowr jeer gaarigiisa ayuu dhex seexday cabsi uu ka qabay in guriga habeenimo isagoo jiifo in loogu soo galo.”
“Furaha Copy-ga gurigiisa wuu maqan yahay sido kale Saaxiibtiis Rhea, saaxiibkiis iyo shaqaalaha guriga arinkaan wey ogaayen iyo marka Sushant loo soo hanjabi jiray balse wey cabsadeen weyna ka gaabsadeen inee ka hadlaan saas eetahay Sushanr guriga ayee ku cidleyeen ileen Dawood Ibrahim ayee ka cabsadeen.”
“Ugu dambeyn Sushant maalin kahor geeridiisa kaamirada qarsoon waa la damiyay arimahaas oodhan ayaa cadeynaayo in Dawood ka dambeyo waayo Dawood Bollywood isaga ka taliyo qofkii hadalkiisa ka hor imaado wuu dilaa waana sababta jilayaasha qaar xafladihiisa oga qeyb galaan sido kale booliska wey ogyihiin weyna ka gaabiyeen kiiskan, waxaa haboon in CBI lagu wareejiyo koley guud ahaan kiiska.”
Ninkaan hadalkaas yiri ma cadeymo kale ayuu hayaa mise fikirkiisa kaliya ayuu ka hadlay waa suaasha la is weydiinaayo.